Ungachinja sei mudzi password muFedora | Linux Vakapindwa muropa
MuGnu / Linux tinogona kushandura password yemumwe mushandisi, chero munhu kunze kwemidzi kana superuser. Pasiwedhi inogona kungochinjwa chete kana iwe uri superuser. Asi ko kana iwe ukakanganwa iyo password password? Ndedzipi sarudzo dziripo dzekugadzirisa izvi? Isu tinofanirwa kudzoreredza iyo Gnu / Linux kugovera?
Pane mhinduro ye dambudziko rekukanganwa mudzi password, asi ichokwadi kuti kugovera kwega kwega kune mhinduro yakasiyana. Tevere isu ticha tsanangura maitiro ekuita iyi mudzi password password muFedora. Chekutanga pane zvese, usaite izvi muzvikwata zvekugadzira zvekunakidzwa nekuti kana paine kukanganisa ucharasa ruzivo rwese.
Kuti tishandure iro password password isu tinofanirwa kukanganisa kutanga kwaFedora Grub. Isu tichazvikanganisa nekudzvanya iyo E bhatani kana iyo Grub skrini ikaonekwa. Chidzitiro senge chinotevera chichaonekwa:
Saka tinoenda kuLinux16 mutsara uye isu tinoshandura izwi rakamisikidzwa «rghb yakanyarara» kubudikidza
Iye zvino tinodzvanya Ctrl + X kuenderera mberi nekukodha maitiro. Kana iyo system yakavharidzirwa, ikozvino ichatibvunza isu password yeLUKS.
Neichi isu takaita kuti Fedora system itakure mune emergency mode, ikozvino isu tinofanirwa kukwirisa hard disk nemirairo inotevera:
Uye isu tinoita iyo chroot yekuraira kuti uwane iyo system. Nokunyora zvinotevera:
Uye zvino tinogona run passwd raira kuti uchinje midzi password. Mushure mekuita iwo murairo, isu tinozobvunzwa kuisa iyo nyowani midzi password. Iye zvino tinonyora Buda kaviri kuti utangezve sisitimu. Mushure meizvozvo isu tinotanga musangano semidzi uye kudzorera iyo grub shanduko nekunyora izvi:
Neizvi, tichava nemidzi nyowani password yashandurwa uye isu tinokwanisa kushanda tisina kudzoreredza kana kurasikirwa neyedu data.
Mamwe mashoko - Fedora Magazine
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Ungachinja sei mudzi password muFedora